Assimilation - अन्य व्यक्तिसँग मर्ज प्रक्रिया। त्यहाँ एक स्वैच्छिक आधारमा रूपमा यस्तो कुरा हो, र शक्ति हो।
"Assimilation" को अवधारणा Ethnography र समाजशास्त्र मा प्रयोग गरिन्छ। यो एक जातीय समूह वा यसलाई स्वामित्वको केही विशिष्ट सुविधाहरू भागहरु को हानि हो। फलस्वरूप, तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई देखि उधारो छन्। सामान्य मा, Assimilation एक वास्तविक जातीय र सांस्कृतिक पारी छ। यसलाई साधारण एक पटक विभिन्न प्रतिनिधित्व, एकल सामाजिक समूह को चेतना हुन्छ।
अर्को एक राष्ट्र को विलय को प्रक्रिया पनि शान्तिमा वा सैन्य हालतमा ठाउँ लिन्छ? यो प्रश्नको unequivocal जवाब छैन। "Assimilation" को अवधारणा फरक syncretism र अस्पष्टता छ।
अर्को एक राष्ट्र मर्ज प्रक्रिया स्वेच्छाले केही अवस्थामा हुन्छ। यहाँ तपाईं प्राकृतिक Assimilation कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर कहिले काँही अर्को एक मान्छे को फ्युजन हिंसात्मक हालतमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी कृत्रिम Assimilation को कुरा।
पनि जनताहरु फ्युजन प्रक्रिया पूरा वा आंशिक, सामाजिक वा जातीय हुन सक्छ।
अर्को एक राष्ट्र को विलय स्वाभाविक हुन्छ भने, प्रक्रिया लामो समय लाग्छ। यस मामला मा Assimilation बिस्तारै स्थान लिन्छ। यसलाई विभिन्न जातीय समूहका सम्पर्क फलस्वरूप बाहिर छ। एक समूहबाट अर्को एकै समयमा केही सामाजिक र एथ्नो-सांस्कृतिक परम्परा हस्तान्तरण छन्।
मान्छे को एक अन्य साथ मर्ज प्रक्रिया हिंसा मार्फत हुन्छ भने, त्यसपछि जातीय र सामाजिक प्रणाली को अर्थपूर्ण विनाश।
कृत्रिम Assimilation जानाजानी कारण। यस मामला मा यो लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य तरिका एक अर्थपूर्ण राज्य नीति द्वारा कवर छ। एक राष्ट्र अर्को साथ मर्ज प्रक्रिया राष्ट्रलाई भन्दा kvaziobschestv स्थितिमा (को आर्य जाति, सोभियत मान्छे), र यति मा सिर्जना गर्ने, मात्र उपनिवेशवाद, आर्थिक विस्तार, धार्मिक सांस्कृतिक र भाषाई प्रभुत्व बाध्य आचरण को फलस्वरूप हुन्छ। डी प्राय बाध्य Assimilation द्वारा हासिल छ राजनीतिक हुक्म। Assimilation विभिन्न प्रकारका विचार गर्नुहोस्।
संस्कृति को प्रभाव
अर्को साथ मर्ज को Assimilation प्रक्रिया जस्तै मान्छे को एक शान्तिमा वा सैन्य कार्य द्वारा हुन्छ। त्यसैले, एक विशेष क्षेत्र मा बाँच्न र एक विशेष नस्ल छ जो मान्छे, आफु को लागि धेरै फरक संस्कृति, राजनीतिक महत्त्व वा श्रेष्ठता संग लाग्न सक्छ।
एउटा उदाहरण ल्याटिन संस्कृति को क्रमिक ग्रहण र दासत्वमा मानिसहरूले भाषा हो।
सांस्कृतिक Assimilation दुर्घटना वा शक्ति द्वारा या त हुन्छ। मानिसजातिको इतिहास घटनाहरू दुवै पहिलो र दोस्रो संस्करण को उदाहरण धेरै संचित छ। कहिलेकाहीं एक संस्कृति अर्को अन्तर्गत spontaneously adapts। तर कहिले काँही यो हिंसात्मक हालतमा हुन्छ। बाध्य पुरानो र धनी संस्कृति कमजोर जोडती।
शब्द "Assimilation" अक्सर तिनीहरूलाई लागि अर्को देशमा स्वेच्छाले resettle मानिसहरूलाई लागू हुन्छ। नयाँ स्थानमा, तिनीहरूले अवस्थित परम्परा र चलन यहाँ फरक, आफ्नै ल्याउन।
फलस्वरूप, केही सांस्कृतिक परिवर्तन समाजमा स्थान लिइरहेको छ। र तिनीहरूले सामान्य एक-तरिका प्रक्रिया छैन। Assimilation को अवधारणा कमजोर संस्कृति आवश्यक बलियो, एक मा मर्ज कि सुझाव। यो सबै मान्छे को मिलाइएको मार्फत र आफ्नो प्रत्यक्ष सम्पर्क माध्यम हुन्छ।
Assimilation को निरन्तरता
अर्को एक राष्ट्र को विलय को प्रक्रिया निरन्तर संसारमा भइरहेको छ। त्यहाँ विशेष देशहरूमा र क्षेत्रहरु मा कुनै प्रतिबंध हो। त्यसैले, भाषाहरू जान्नु तपाईं अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्न सक्छन्। यो कुनै एक समूह आफूलाई सीमित छैन मौका दिन हुनेछ। विभिन्न देशहरूमा बस्ने मान्छे, सीमा र विभिन्न जातीय समूहका परम्परा को विभिन्न तत्व replenishes एक वैश्विक संस्कृति को गठन गर्न योगदान पुग्छ।
कहिलेकाहीं अन्य साथै interconfessional र interethnic विवाहको अवस्थामा, उत्साह, थप आकर्षक संस्कृति एक फरक चरण मा जा साथ मर्ज प्रक्रिया। वर्ण को बाध्य Assimilation जातीय समूह (नरसंहार) र केही सांस्कृतिक र भाषाई घटना को राज्य को दमन को आंशिक उन्मूलन को सैन्य annexation मा, मानिसहरूले बाध्य माइग्रेसन को अवस्थामा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
मानिसजातिको इतिहास जितेको जातीय समूह को कुल परिवर्तन को आधारभूत विधिहरू परिचित छ। तपाईं भाषा, संस्कृति र धर्म परिवर्तन तिनीहरूले छन्। यो विधि विजयी, को जितेको मानिसहरूले "taming" प्रयोग भएको थियो।
यो अभ्यास सामान्यतया colonialist विजय समयमा, पुरानो दिन प्रयोग गरिन्छ। तर, यस्तो तरिका प्रयोग आज देख्न सकिन्छ।
एक नयाँ सामुदायिक को जन्म
अर्को एक राष्ट्र मर्ज प्रक्रिया जातीय दृष्टिकोण चरण हुन्छ। दुई सम्पर्क र कहिलेकाहीं थप मानिसहरूका जन्म जब नयाँ परम्परा र चलन छ समुदाय।
यो प्रतिक्रिया उत्पादन र संवर्धन मात्र होइन संस्कृतिका, तर पनि आफ्नो व्यक्तिगत संविधान तत्व हो।
यो प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण चरण को भाषाई Assimilation छ। यो चरण नयाँ संस्कृति को गठन मानिसहरूले घरेलू rapprochement पछि सुरु हुन्छ।
जातीय Assimilation को चरण
को मानिसहरूले rapprochement प्रक्रिया सक्रिय अमेरिकी समाजशास्त्री रबर्ट पार्क द्वारा अध्ययन गरिएको छ। उहाँलाई अनुसार, जातीय Assimilation निम्न चरणहरु मार्फत बित्दै:
4 Samu Assimilation।
यस शोधकर्ता को मानिसहरूका बीच rapprochement प्रक्रिया को कोर आफ्नो संस्कृतिका विलय विश्वास गर्दछन्। हाल, यो अक्सर अवलोकन छ। यसलाई विश्व अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीयकरण को एक प्रक्रिया provokes। यस मामला मा, Assimilation राष्ट्रिय नीति एक विशिष्ट निर्देशन भन्दा अधिक छ, जो को उद्देश्य एक जातीय समूह गैर-भौतिक उन्मूलन छ।
जातीय Assimilation विशेष रूप अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर संग देशहरूमा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो सबै माथि, जो आप्रवासी को ठूलो संख्या उपस्थित ती राज्य।
एक राष्ट्र को यो मामला मा, अर्को विलय को प्रक्रिया नियम, ठूलो मान्छे, अर्को को मध्यम मा पहिले अलग जातीय समूह को वास्तविक dissolution छ। एकै समयमा जातीय पहिचान परिवर्तन assimilated। तिनीहरूलाई लागि, प्रक्रिया ethnotransformational हुनेछ। यसको पहिचान कुनै पनि परिवर्तन undergo गर्दैन देखि अन्य पक्ष etnorevolyutsionny प्रक्रिया मार्फत जानेछन्।
Assimilation अवलोकन गर्न सकिन्छ आजको विकसित देशहरूमा मात्र होइन। यो प्रक्रिया मानव इतिहास को सबै अवधि मा अस्तित्व छ। सबैभन्दा glaring उदाहरण - रूसी मान्छे को Assimilation, फिनिश बोल्ने कुल मूर र Meshcherov उपाय। यो प्रक्रिया त्यहाँ Kievan रस हुँदा एक अवधिमा भयो।
प्रसार को वेग
मानिसहरूले फरक फरक देशहरूमा भइरहेको प्रक्रियाहरू convergence। आफ्नो गति नयाँ वातावरणमा यसको रहन, बन्दोबस्त ढाँचाहरू, पेशा, सामाजिक र कानुनी स्थिति, मिश्रित विवाह, वैवाहिक स्थिति र यति मा को निष्कर्षमा फ्रिक्वेन्सी समयमा assimilated जातीय समूह को संख्या जस्ता कारक प्रभावित छ। डी
यसलाई त्यहाँ आफ्नो व्यापार गतिविधिहरु मा अधिकतम समानता छ भने मानिसहरूका को rapprochement थप तेजी हुन्छ कि विश्वास छ। तर, यो कारक को प्रभाव अस्पष्ट छ। नियम, आर्थिक गतिविधिहरु को समानता Assimilation प्रक्रियाहरू को intensification योगदान। निस्सन्देह, उनको आर्थिक वातावरण नजिक मा रही जातीय समूह राम्रो चाँडै यो संग मर्ज। तर गर्दा प्रतिस्पर्धी संघर्ष हो। तिनीहरूले मूल र विदेशी जनसंख्या बीच आउँदैन। यो, बारी मा, यो अत्यन्तै कठिन Assimilation प्रक्रिया बनाउँछ।
nationalities मर्ज गति हदसम्म आप्रवासी को परिवार अवस्था मा निर्भर गर्दछ। अन्य देशहरूमा, सामान्यतया मानिसहरू काम गर्न आउँछन्। यस मामला मा, तिनीहरूलाई को एक जो आफ्नो परिवारको वा बिना, साथै स्नातक आए, विवाह भएको छ।
के मानिसहरू भन्दा द्रुत आदिवासी मान्छे संग मर्ज? निस्सन्देह, काल्पनिक। तिनीहरूले स्थानीय बालिका विवाह र नयाँ परिवार सिर्जना गर्नुहोस्।
आप्रवासी अन्य विभाग जस्तै व्यवहार कसरी गर्न सक्छ? जो आफ्नो परिवार संग आएका एक, Assimilation प्रक्रिया लामो पछिल्लो हुनेछ। आखिर, प्रियजनलाई संग संचार तिनीहरूलाई कायम गर्न मात्र होइन तर पनि पुरानो जातीय समुदाय उर्तानु गर्न अनुमति दिन्छ।
पनि कम दर आफ्नो परिवारको छाडेका मानिसहरूको Assimilation प्रक्रिया छ। तिनीहरूले घर को विचार मा बाँच्न र पाहुना देश मात्र अस्थायी हेवन मानिन्छ। निस्सन्देह, तिनीहरूले विद्यमान स्थानीय अवस्था भिज्न छ। तर नयाँ वातावरणमा भंग, तिनीहरूले चाहँदैनन्।
दुई वा बढी सम्पर्क मान्छे को धेरै प्रभाव स्तर अनुपात संस्कृति को Assimilation प्रक्रियाको दर। रूपमा चाँडै सकेसम्म यो प्रक्रिया एक स्तर खेल क्षेत्र को मामला मा जान्छ। Assimilation को र कुन अलिकति संस्कृति को स्तर नाघ्यो मध्यम, मा सम्पर्क जातीय समूहमा उच्च दर।
र तेज मतभेद भने के हुनेछ? यस मामला मा, मानिसहरूले मर्ज प्रक्रिया धेरै गाह्रो हुन्छ।
जातीय समूहहरू संलग्न Assimilation प्रक्रियाहरू आफ्नो संस्कृति र भाषा (जस्तै, बेलारूसी र रूसी) मा यस्तै हो भने, उहाँले एकदम साधारण देखि यो भेद सुविधाहरूको एक नम्बर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा, एक जातीय konversatsii को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रक्रिया बाहिर यसको बोध बाटो बाबजुद, अन्य एक समुदाय को विलय लगे जो संग गति गर्दा, त्यहाँ मान्छे को एक निश्चित सर्कल को भाषाई र सांस्कृतिक convergence छ। बिस्तारै लगायो, र कहिले काँही सुरुमा मान्छे को फरक जातीय मूल बीच अस्तित्व सबै मतभेद नष्ट गरे।
टर्की को5सबै भन्दा ठूलो शहर
ओब: प्रवाह को प्रकृति, भौगोलिक विशेषताहरु
स्कूल विषयहरू बारे रोचक पहेली
2016 मा मोडेल "स्कोडा" र आफ्नो प्राविधिक विशेषताहरु
डुरियन - फल राजा
"गार्डन" - को Waterfront Yakimanskaya मा रेस्टुरा: एक सिंहावलोकन, मूल्यहरू समीक्षा
Mel गिब्सन: Filmography। सबै भन्दा राम्रो चलचित्र र मेल गिब्सन अभिनय गर्ने कलाकार
ग्यास आउटलेट ट्यूब कसरी प्रयोग गर्ने। को वाष्प ट्यूब को उचित परिचय
बब केश - रचनात्मक र स्थिति